Ngabe uhlakaniphile kunoMark Cuban? | Martech Zone
ULwesihlanu, February 2, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ungazizwa ungconywana ngawe ngemuva kokuvakashela iJuicy Studio, enethuluzi lokuhlaziya eliku-inthanethi lokuqinisekisa izinga lokufunda lesayithi lakho…
NgeJuice Studio: Ama-algorithms wezinga lokufunda anikezela kuphela umhlahlandlela onzima, ngoba bavame ukuvuza imisho emifushane eyenziwe ngamagama amafushane. Ngenkathi ziyizinkombandlela ezinzima, zinganikeza inkomba ewusizo yokuthi ngabe ubeke okuqukethwe kwakho ezingeni elifanele lezithameli zakho ezihlosiwe.
Ngakho-ke kufanele ube yiliphi izinga lebanga ukuze ufunde amabhulogi alandelayo? Nasi isampula samanye amasayithi ayishumi, amanye awo kungamabhulogi aphezulu ayi-100, namazinga ahambisana nawo okufunda:
Maka iCuban = 5.70
Isiza Sami = 6.92
I-TechCrunch = 7.06
Ngibheke amanye amasayithi ambalwa (ngeke ngiwasho)… nama-yikes! Abanye babo bathole amaphuzu aphansi impela. Bheka isiza sakho nge Isivivinyo sokufundeka kweJuicy Studio.
QAPHELA: Ukubeka nje lokhu okuthunyelwe kuzoshintsha amaphuzu ami kancane… ngethemba lokuthi ngasohlangothini oluhle!
Siyabonga ngesixhumanisi. Nazi izibalo zami.
Inkomba yenkungu ye-Gunning: 7.09
I-Flesch Ukufunda kalula:
Ibanga leFlesch-Kincaid: 4.79
Ngibe sengiqhathanisa lokho ne-BBC Technology Web Site. Kubukeka sengathi isiza sami sifundeka kalula 🙂
Inkomba yenkungu ye-Gunning: 9.12
Ibanga leFlesch-Kincaid: 5.98